दिमागलाई स्वस्थ र तेज राख्न यी ५ सुपर फुड्स सेवन गर्नुहोस् – Khabar PatrikaNp
दिमाग वा मस्तिष्क हाम्रो शरीरको सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण अंग हो। मस्तिष्क हाम्रो शरीर को हरेक गतिविधिको लागि जिम्मेदार छ। हाम्रो दिमागले २४ घण्टा सातै दिन काम गर्छ। हामी सुतिरहेका छौं भने पनि हाम्रो दिमागले भने काम गरिरहन्छ। तर २४ घण्टा काम गर्नको लागि हाम्रो दिमागलाई ईन्धन पनि चाहिन्छ र यसले इन्धन आहारबाट प्राप्त गर्छ। दिमागलाई स्वस्थ र तेज राख्न के खानुपर्छ भन्ने बारेमा हामी सँधै दु:खित हुन्छौँ। केहि यस्ता आवश्यक खाना छन् जसलाई आफ्नो आहारमा समावेश गरेर दिमागलाई स्वस्थ र तेज राख्न सकिन्छ।
ब्रोकली सबैभन्दा पौष्टिक तरकारीमा पर्छ। ब्रोकलीमा भिटामिन, खनिज र एन्टिअक्सिडेन्ट्सको उच्च मात्रा हुन्छ। ब्रोकोलीमा भिटामिन-ई प्रचुर मात्रामा पाइन्छ जसले दिमागको विकासमा मद्दत गर्छ। ब्रोकोलीमा भरपूर मात्रामा फाइबर पाउनुको कारण यसलाई सलाद, पास्ता, तरकारी आदिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पालुंगोमा आइरन र भिटामिन-ई पाइन्छ। पालुंगो सेवन गर्दा दिमाग मजबूत हुन्छ। यस्तै, धेरै प्रकारका पोषक तत्वहरू पालुंगोमा पाइन्छ जसले हाम्रो मस्तिष्कलाई सजिलैसँग कार्य गर्न क्षमता प्रदान गर्छ।
बदाम, ओखर तथा काजुमा भिटामिन-ई पनि उच्च मात्रामा हुन्छ। यदि तपाईंको शरीरमा भिटामिनको कमी छ भने तपाईंले दैनिक नट्स सेवन गर्नुपर्छ। यो तपाईंको शरीरको विकासको लागि अत्यन्त लाभदायक साबित हुनेछ।
एभोकाडो फलहरू मध्ये सबैभन्दा पौष्टिक फल हो। यो फल जति खानमा जति स्वादिष्ट हुन्छ , त्यति नै हाम्रो शरीरको लागि लाभदायक हुन्छ। यसले उच्च मात्रामा एन्टिअक्सिडेन्टहरू समावेश गर्छ। भिटामिन-ई को एक राम्रो स्रोत भएकोले यस फलको सेवनले छाला, कपाल र मस्तिष्क को विकास मा मद्दत गर्छ।
ओलिभ आयल खाना पकाउन प्रयोग गरिन्छ। भिटामिन-ई ओलिभ आयलमा प्रशस्त पाइन्छ। यस कारणले गर्दा मानिसहरूले खाना पकाउनको लागि यो तेल प्रयोग गर्छन्। ओलिभ आयल दिमागका लागि मात्र उपयोगी छ साथै यसले हृदय रोगलाई रोक्न पनि मद्दत गर्छ।
Prevजीवन रहे फेरि दुसेमनी गरौला तर, अहिले मिलेर बसौं : नायिका रेखा थापा भिडियो हेर्नुहोस
Nextशास्त्रअनुसार ,जन्म बारअनुसार कुन पेशा अंङ्गाल्दा हुन्छ फलिफाप ?जान्नुहोस
नेपाली पैसा कहाँ र कसरी छापिन्छन …? थाहा पाउनुहोस !
भाइरल जन्तरे मामाको घरमा मध्यरातमा यति धेरै रमाइलो ,गायन मात्र हैन अभिनय पनि दमदार देखियो … ! (भिडियो सहित)